Sahanka Qaran ee Nafaqada Yaryar oo lagu daah furay Soomaaliya – Somali Top News
Sahanka Qaran ee Nafaqada Yaryar oo lagu daah furay Soomaaliya
Wasaaradda Caafimaadka iyo Adeegyada Dadka ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta daah-rogtey Sahanka Qaran ee Nafaqada Yaryar ee Soomaaliya iyada oo ay la shaqeynayaan UNICEF iyo la-hawlgalayaal kale.
Sahankan waa kii ugu horreeyey ee mug leh oo la xiriira nafaqada ee uu dalku sameeyo tan iyo 2009kii .“ ayaa lagu yiri qoraal ka soobaxay wasaaradda caafimaadka.
Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in Afarta bilood ee soo socda ururin doonnaaa xog muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka, nafaqada iyo hab-dhaqanka dadka ee xiriirka la leh nafaqada yaryar ee heer qoys taas oo gacan ka geysan karta in si ka wanaagsan sida hadda loo fahmay xaaladda caafimaad iyo nafaqo ee carruurta iyo haweenka ee Soomaaliya lagu ogaado.
Dr Fawsiya Abiikar, oo ah Wasiirka Caafimaadka ayaa tiri “Waxaa laga yaabaa in ay hawshu culus tahay, laakiin natiijooyinka ka soo baxaya ayaa ahaan doona kuwo u qalma dadaalka lagu bixinayo: waxaa ay ina siin doonaan macluumaad wanaagsan oo ku saabsan dhibaatooyinka caafimaad ee ina haysta, waxaana ay gacan innaga siin doonaan in aan la nimaadno istiraatiijiyado ka habboon kuwa hadda, kana kharash yar oo lagu dhisayo dadweyne caafimaad qaba, oo nafaqadoodu wanaagsan tahay maanta iyo ummad baraare ku nool berri.”
Waxyaabaha wasaaradda diiradda saari doonto waxaa kamid ah Nafaqada yaryar, sida maaddada ayodhiinta (iodine), fitamin A iyo birta (iron), ayaa ah waxyaabaha asaasiga ah ee dhisaya caafimaad wanaagsan.
Yaraanta ay maaddooyinkan ku yar yihiin jirka ayaa halis weyn ku ah caafimaadka iyo koboca ee dadweynaha, gaar ahaan carruurta iyo haweenka uurka leh.
“UNICEF waxaa ay Wasaaradda Caafimaadka iyo Adeegyada Dadka ee Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ku bogaadineysaa hoggaanta ay hoggaamineyso Sahanka. Tani waxaa ay ka dhigan tahay tallaabo weyn oo loo sii qaadey sii wanaajinta xaaladda caafimaad iyo nafaqo ee carruurta iyo haweenka dalka,” ayaa uu yiri Jesper Moller, oo ah Ku-simaha Wakiilka UNICEF Somalia. “
← Ghana plans to deploy 160 police officers to stabilize Somalia
Al shabaab oo si rasmi ah u shaacisay ujeedka weerarkii Nairobi →
Farmaajo khudbadiisii maanta kagama hadlin dagaalka Al shabaab iyo Amniga
Madaxda xisbiga Himilo Qaran oo caawa ku shiray magaalada Muqdisho
October 7, 2019 Somali Top News 0
Mayor Yariisow buried at Police Academy in Mogadishu